Ayyaana Cuuphaa, duudhaaleen aadaafi jaalalaa calaqqisan
Ayyaana Cuuphaa, duudhaaleen aadaafi jaalalaa calaqqisan Featured
Itoophiyaatti ayyaanonni amantii waggaa wagaadhaan kabajaman duudhaa gama amantiitiin qabaniin gamatti duudhaa hawataa aadaadhaan walqabatanirraa ka'uun wayita ayyaanota kanneeniitti daaw'attoonni heddu as yaa'u.
Ayyaanota duudhaa kanaan badhaadhan keessaa tokko ayyaana cuupaati. Jalabultiin ayyaanichaa hordoftoota amantii Ortodoksii biratti kataraa jedhamee beekama.
Itoophiyaatti taabota baatanii ayyaana cuuphaa kabajuun kan eegalame bara mootummaa Atsee Gabramasqal (bara 1486-1500) akka ta'e himama.
Oggaa taabonni gara laga cuuphaa geeffamuufi deebifamu hordoftoonni amantichaa uffannaawwan gara garaatiin miidhaganii dhiironni shubbisaan dubartoonni ililleedhaan waa'elchu.
Cuuphaan kan kabajamu cuuphamuu Yesuus Kiristoos Laga Hordaanositti raawwatame yaadachuuf yoo ta'u, hordoftooni amantichaa duudhaasaa eeggatanii bishaan facaafachuun kabaju.
Ayyaanni cuuphaa sirna amantii maddiitti dhuudhaalee aadaas kan of keessatti qabateedha. Ayyaana kanarratti saboonniifi sablammoonni Itoophiyaa taphawwansaanii daran miidhagu afaanota adda addaatiin ni dhiyeessu.
Namoonni ayyaanicha kabajamuuf deeman walbeekanis beekuu baatanis gaafa sana wajjummaan taphatu, burraaqu, shubbisu.
Kanaan walqabatees ayyaanichi dargaggoota walkaadhimmachuu barbaadaniifis carraa gaarii ni uuma. Umanni ayyaana kana sanyiifi halluu otoo addaan hinbaasin tokkummaadhaan kabaju. Kanaafuu ayyaanichi ummata walitti dhiyeessa, aadaa walgargaarsaas ni guddisa.
Ayyaana cuuphaa kabajuuf lammiileen biyyoota adda addaa, dippiloomaatoonni, ambaasaaddaroonniifi qondaaltonni mootummaa olaanaan akkasumas abbootiin amantiifi amantoonni ni argamu.
Ayyaanni kun naannawawwan biyyattii hundatti yoo kabajamellee mogaalota Gondar, Laallibalaa, Maqalee, Aksuumiifi Finfinneetti sirna addaatiin iddoowwan qophaa'eefitti sirna ho'aadhaan ayyaaneffama.
Ayyaanonni amantii biyya keenyatti kabajaman akkuma irranatti eeruun yaalame aadaa waljaalalaa, tokkummaa, nageenyaa, walgargaaruufi walutubuu ummatootaa kan cimsan waan ta'eef lammiileen biyyattii duudhaa kana caalaatti cimsanii eeguun akka dhalootatti ce'u gochuu qabu.
Torban kana/This_Week 11236
Torban darbe/This_Month 97593
Guyyaa mara/All_Days 1436016